Andinin-dranomasina volamena - Fiangonan'Andriamanitra Soisa manerantany
haino aman-jery > Journal succession > 2015-03 mpandimby ny Magazine > Andininy vongan volamena
Gold Chunk andininy
David Letterman, tompon'ny fampisehoana fialam-boly amerikana, dia fantatra amin'ny lisitry ny folo voalohany ary matetika aho nanontaniana momba ireo horonantsary folo, boky, hira, lovia ary birao. Mety manana lisitra tianao indrindra koa ianao. Tao anatin'ny taona vitsivitsy, ny sasany amin'ireo lahatsoratra nataoko dia nifototra tamin'ny andininy folo tiako indrindra avy ao amin'ny Baiboly. Ireto misy enina amin'izy ireo:
"Izay tsy tia dia tsy mahalala an'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia fitiavana."1. Johannes 4,8)
“Nafahan’i Kristy ho afaka isika! Koa tomoera tsara, ary aza avela haverina aminareo intsony ny ziogan’ny fanandevozana!” (Galatiana 5,1)
“Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanany ho amin’izao tontolo izao hitsara izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao.” ( Jaona 3:17 ).
Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa Kristy maty hamonjy antsika fony mbola mpanota isika” (Rom 5,8)"
Koa ankehitriny dia tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy Jesosy” (Rom 8,1)"
Fa ny fitiavan'i Kristy no mampirisika antsika, indrindra fa satria matoky isika fa raha maty ho an'ny rehetra ny iray, dia maty koa izy rehetra. Ary izany no nahafatesany ho an’ny olona rehetra, mba tsy ho velona ho an’ny tenany intsony izay mitoetra ao, fa ho an’izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy.”2. Korintiana 5,14-15)
Manome hery ahy ny famakiana ireo andinin-tsoratra masina ireo ary antsoiko foana ireo andininy ireo ahy. Tao anatin'ny taona vitsivitsy lasa izay, rehefa nianatra bebe kokoa avy amin'ny fitiavana mahatalanjona sy tsy manam-petra Andriamanitra dia niova tsy tapaka ny lisitra ity. Ny fitadiavana io fahendrena io dia toy ny fitadiavana harena volamena - ity zavatra mahafinaritra ity izay mety hita amin'ny natiora amin'ny habeny sy ny endriny maro, hatrany amin'ny mikroskopika ka lehibe. Tahaka ny volamena amin'ny endriny tsy ampoizina tampoka, ny fitiavana tsy miova avy amin'Andriamanitra izay ny fonony dia mety hipoitra amin'ny endrika tsy ampoizina sy amin'ny toerana tsy ampoizina. Ny teolojia TF Torrance dia mamaritra ny fitiavana toy izao manaraka izao:
“Tena tia anareo Andriamanitra ka nanolotra ny tenany tao amin’i Jesosy Kristy Zanany malalany. Nanolotra ny maha-Andriamanitra azy manontolo ho famonjena anao Izy. Tao amin'i Jesosy, Andriamanitra dia nahatsapa ny fitiavany tsy manam-petra anao amin'ny natioran'olombelona anao tamin'ny fomba farany ka tsy afaka namerina azy intsony izy raha tsy nandà ny fahatongavany ho nofo sy ny hazofijaliana ary noho izany ny tenany. Maty ho anao manokana i Jesoa Kristy satria mpanota sy tsy mendrika Azy ianao. Efa nataony ho azy ianao, na mino azy ianao na tsia. Efa namatotra anao taminy tamin’ny fomba lalina tokoa izy tamin’ny alalan’ny fitiavany ka tsy hamela anao velively. Na dia mandà azy aza ianao ka maniry ny ho any amin'ny helo dia tsy handao anao ny fitiavany. Noho izany, mibebaha ary minoa fa Jesosy Kristy no Tomponao sy Mpamonjy anao ”(The Mediation of Christ, p. 94)
Mitombo ny fankasitrahantsika ny fitiavan’Andriamanitra rehefa mamaky ny Baiboly isika, satria i Jesosy, ilay fitiavan’Andriamanitra, no vatofantsika. Mampalahelo àry aho rehefa asehon’ny fitsapan-kevitra farany fa betsaka ny Kristianina mandany fotoana kely “amin’ny Tenin’Andriamanitra”. Ny mampihomehy anefa dia ny 87% amin'ireo nanontaniana tamin'ny fanadihadiana momba ny fitomboana ara-panahy an'i Bill Hybel dia nanamarika fa "fanampiana am-piangonana amin'ny fahazoana lalina ny Baiboly" no filany ara-panahy voalohany. Mampihomehy ihany koa ny nilazan’ireo namaly ny fahalemena lehibe indrindra teo anivon’ny fiangonany noho ny tsy fahaizany nanazava ny Baiboly tamin’ny fomba azo takarina. Vao haingana aho no namaky ny boky Mika (iray amin’ireo mpaminany tsy ampy taona) no nahitako ity harena ity: “
Aiza no misy Andriamanitra tahaka anao izay mamela heloka sy mamela ny tavela amin’ny lovany; izay tsy mifikitra amin’ny fahatezerany mandrakizay, fa mamindra fo Izy!” (Mika 7,18)
I Mika dia nanambara izany fahamarinana momba an'Andriamanitra izany rehefa nanambara ny fotoan'ny sesitany i Isaia. Fotoana nateraky ny loza. Na izany aza, nanana fanantenana i Micha satria fantany fa be indrafo Andriamanitra. Ny teny hebreo amin'ny famindram-po dia avy amin'ny fiteny ampiasaina amin'ny fifanarahana eo amin'ny olona.
Ny fifanarahana toy izany dia misy fampanantenana ny amin'ny tsy fivadihana mahatoky izay mamatotra ary amin'ny fotoana iray ihany koa dia omena maimaim-poana. Toy izany koa no ahafantarana ny fahasoavan’Andriamanitra. Nilaza i Mika fa nampanantenaina ny razamben’ny Israely ny fahasoavan’Andriamanitra, na dia tsy mendrika izany aza izy ireo. Mampahery sy mandrisika ny fahatakarana fa Andriamanitra ao amin’ny famindram-pony dia mitahiry izany ho antsika koa. Ny teny hebreo ilazana ny famindram-po ao amin’ny Mika dia azo adika hoe fitiavana malalaka sy mahatoky na fitiavana tsy voahozongozona. Afaka matoky isika fa tsy ho voasakana na oviana na oviana ny famindram-pon’Andriamanitra, satria toetrany ny mahatoky araka ny nampanantenainy antsika. Maharitra ny fitiavan’Andriamanitra ary hamindra fo amintsika mandrakariva Izy. Izany no ahafahantsika miantso azy hoe: “Andriamanitra ô, mamindrà fo amiko mpanota!”8,13). Andinin-tsoratra volamena iray tokoa izany.
nataon'i Joseph Tkach